Muxuu macnaheedu yahay macnaha Master Bafög? Qeexidda ereyga maaliyadeed
Start daymaha -Leaks deynta ardayga Master
deynta ardayga Master
Sharciga AFBG (Horumarinta Horukaca Horumarinta), ee Volksmund deynta ardayga Master si joogto ah ayaa loo hagaajiyaa. Ugu dambeyntii, xirmooyinka dhiirrigelinta Masterbafgs ee 1. Agoosto 2016 waa la kordhiyay, iyo kuwa doonaya inay noqdaan farsamo yaqaan ama maareeyaha beeraha, way dalban karaan. Gaar ahaan qoysaska waa in la caawiyaa laakiin sidoo kale ardayda. Shaqada biilka ah waxaad baran doontaa sida loo helo Master Bafög.
Maalgelintan waxaa laga helayaa sanadka 1996. Marka loo eego tirakoobyada dowladda, dadka 170.000 waxay isticmaalaan sanad walba. Ujeedada maalgelinta waa: In la abuuro dhiirigelin dheeraad ah oo waxbarasho dheeraad ah (oo ka saraysa jaamacadaha oo dhan) kuna dhiiri geli inay ganacsigooda u bilaabaan sidii loo shaqeeye goobaha tababarka.
Sharciga Horumarinta Horumarinta Horumarinta (AFBG) wuxuu kor u qaadaa xirfadlayaasha iyo xirfadlayaasha kale ee raba in ay sameeyaan koorso tababareed si ay u noqdaan xirfadle ama mihnad warshadeed, farsamo yaqaan, maamulaha ama baraha gobolka.
Kaalmada waxaa qayb ahaan loo bixiyaa deeq ahaan, iyo qayb ahaan sida dayn yar oo ka socota KfW. Ma jiro xadka da'da taas. Master Bafög wuxuu sidoo kale heli karaa bafög ascan ah dad kale oo aan lahayn tababar xirfadeed.
Shuruuda waa shahaadada xirfadeed ee sanado badan oo shahaadada la rabo waxay ku saleysan tahay waayo-aragnimada xirfadeed ee la heli karo.
Xitaa ajaanibta waxaa lagu dallaci karaa xaalado gaar ah oo leh Master Bafög:
- Deganaanshaha joogtada ah ee Jarmalka.
- Ogolaansho joogitaan / degenaansho joogto ah.
- Waxaa laga aqbalay Germany tan iyo bilihii 15 waana la shaqeeyay.
Yaa xaq u leh Master Bafög?
Lacagta waxaa ku jiri kara wixii dalab ah ee tababarka xirfadaha dhameystiran ama shahaadada xirfadle ee la midka ah. Master - Bafög wuxuu sidoo kale codsan karaa ardayda bajalada iyo jaamacadaha. Si kastaba ha noqotee, shahaadada laga rabo waa inay ka sarreysaa heerka shaqaale xirfad leh, shaqo-barasho, caawiye imtixaan ama shahaadada dugsiga ee xirfadda. Kuwani waa kuwan soo socda:
- Khabiirka bangiga
â € "Developers software
- Farsamada ilkaha
- Master Baker
- La-taliyayaasha ilaalinta deegaanka
- Khabiirka Suuqgeynta
- kalkaalisooyin takhasus leh
- Khabiir ku shaqeeya warshadaha
- Farsamada macluumaadka ganacsiga
- Maamulaha xafiiska
Waxbarashada sii socota waa la buuxin karaa wakhti buuxa, wakhti dhiman, iyada oo loo marayo waxbarasho masaafo ama dugsi iyo dugsi aan lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado gaar ah oo ku jira tababarkan tababarka ah si loo hubiyo tayada:
- Muddada ugu yar - saacadaha 400
- waqti buuxa - ugu yaraan saacadaha casharrada 25 ee shaqo maalmeedka 4 bishiiba oo aan ka dheerayn 3 sano.
- Waqti-qayb ah - bil kasta ugu yaraan saacadaha 18 ee aan ka dheerayn 4 sano.
- Waxbarashada fogaanta waxaa loo dallacaa sida qadar go'an.
- Koorasyada laga caawiyo warbaahinta waxaa lagu dhiirigelinayaa haddii ay ku wareegaan isgaadhsiin ku salaysan warbaahinta oo ka badan saacadaha 400. Hubinta guusha joogtada ah ayaa loo baahan yahay.
Meister-Bafög - Adeegyada
Codsadayaasha waxay helayaan adeegyadan soo socda ee Master Bafög:
a.) Dayactirka Post
- Heerka kabidda dhaqaale ee dadka keliya - 768 Euro bishii. Kuwaas waxaa ka mid ah 333 waa Euro, inta soo hartayna waa deynta KfW.
- Qoysaska kelidood ah oo keliya ayaa hela wadarta guud ee maalgelinta ee 1.003 Euro,
- La guursado ilmaha 1 wuxuu helayaa Euro 1.360
- Waxay la qabeen carruur ay 2 hadda ku qaataan Euro 1.473.
- Qoysaska carruurta leh waxay helaan 55 ilmo kasta ilmo kasta, 50 boqolkiiba dadka kale (ka qaybgalayaasha, lamaanaha). J. - Xaas la leh carruurta 2 waxay heli doonaan deeq ka timid 711 Euro. Waalidka kelidiis ah ayaa sidoo kale hela gunnada xannaanada carruurta, iyadoo aan loo eegin dakhliga, ee 130 Euro bishii.
Max. 15.000 Euro waa lacag dheeraad ah oo loogu talagalay koorasyada iyo kharashka baaritaanka. Deeqda "Meisterstück" waxay ku jirtaa 2.000 Euro.
3.) Lacagta guusha
Waxaa jira gunno guul ah oo lagu gaaro imtixaanka ugu dambeeya ee 40 boqolkiiba. Tani macnaheedu waa: 40 boqolkiiba deymaha tababarka iyo kharashka baaritaanka ayaa la ansixiyey.
Ardayda ka qalin-jabisay waxay helayaan dhiirigelinta haddii aad rabto inaad qaadato koorso mihnadeed ama sameyso tababar aad u heer sareeya. Waxaa sidoo kale lagu dhiirrigelinayaa in wax la dhigo.
Hantida waa qiyaastii 45.000 Euro halkii qof. Xaasaska iyo caruurta waxay xaq u leeyihiin 2.100 Euro. Dakhliga cashuurta dakhliga - dadka kabitaanka ah waxay leeyihiin bil walba 290 Euro bilaash ah.
Waxaad ka dalban kartaa Master Bafög xafiiska mas'uulka ka ah dawladda federaaliga oo dhan. Samee waqtigeeda si aad u buuxiso waajibaadkaaga dhaqaale.
Maqaalka horeLombard amaah
Maqaalka xigtamaalgelinta Mezzanine